Blackview BV9000 Pro: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး "မပျက်စီးနိုင်သော" စမတ်ဖုန်း Androidsis
Blackview BV9000 Pro: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး "မပျက်စီးနိုင်သော" စမတ်ဖုန်း
စျေးကြီးပြီးစျေးပေါသောဖုန်းများအလယ်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်၊ ကျိုးနွံသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်အမှန်တရားမှာဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများ၏ခံနိုင်ရည်နှင့်ခုခံနိုင်မှုသည်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီအများစု၏ ဦး စားပေးအဆင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
အကြောင်းအရင်းမှာရံဖန်ရံခါပါဝင်သောအခြားထုတ်လုပ်သူများအပြင်ဒီဇာတ်လမ်းကိုလှည့်ဖျားထားရန်၊ Blackview က Blackview BV9000 Pro ကိုယူဆောင်လာသည်၁၈: ၉ ရှုထောင့်အချိုးအစားရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ပထမဆုံးမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဖုန်း။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်မှုသည်လက်ချင်းချိတ်။ မရဟုမည်သူပြောသနည်း။
Blackview BV9000 Pro သည်အဆင့်မြင့်ဖုန်းမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်သင်ကပြောနိုင်လျှင်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအတွင်းအလွန်ကောင်းစွာသွား။
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင် Blackview BV9000 Pro ၏တင်ပြချက်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း.
သူ့ရဲ့ features တွေနဲ့ specs တွေကတော့တောက်ပနေပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများ၊ ပြုတ်ကျမှုများနှင့်အချို့သောအခြားပြန်တယ်များနှင့်ခြစ်ရာများအတွက်အဓိကအားဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဖုန်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်ဆိုလိုသည်မှာကတိတော်များအရ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းပြီးသင်မတောင်းခံနိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဟေး၊ မင်းကိုဒီ "မပျက်စီးနိုင်သော" ဆိပ်ကမ်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်ကိုသင်ထားခဲ့တယ်။
1 Blackview BV9000 Pro ဒေတာစာရွက်
Blackview BV9000 Pro ဒေတာစာရွက်
မျက်နှာပြင် ၅.၇ လက်မ ၁၈: ၉ (၇၂၀ x ၁၄၄၀p) HD + ၂၈၂ ppi (တစ်လက်မ pixel) IPS နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော Multi-touch Protection Corning Gorilla Glass
လုပ်ငန်းစဉ် MediaTek Helio P25 (8 Cortex-A53 2.3 GHz Core)
လုပ်ငန်းစဉ် ဂရပ်ဖစ် Mali-T880 MP2 (2Mhz တွင် Core ၂ ခု)
ရမ်6GB ကို LPDDR4X
အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ် 128 GB ကို
ချမ်ဘာ နောက်ဘက် - 13MP မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ 2.0MP (f / 5) + 2.0MP (f / 5) ။ CMOS အာရုံခံကိရိယာ။ LED Flash နှင့် Digital Zoom ။ ရှေ့: 8MP ƒ / 2.2 aperture နှင့်အတူ။ CMOS အာရုံခံကိရိယာ
ဘက်ထရီ အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းနှင့်အတူ 4180 mAh ။ မဖြုတ်နိုင်ပါ
OS Android 7.1 ။ နူဂါး
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 154.3mm x 83mm x 14.6mm ။ 175 ဂရမ်
သင်သေချာသတိပြုမိကြပြီ Blackview BV9000 Pro တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်ဥပမာ - လက်ဗွေဖတ်စက်၊ ကင်မရာနှစ်လုံး၊ ၁၈: ၉ အဆင့်မြင့်မျက်နှာပြင်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောပရိုဆက်ဆာအသစ်၊ အလွန်မှန်ကန်သော RAM မှတ်ဉာဏ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သမျှကိုသိုလှောင်ရန်စွမ်းရည်ကြီးမားသည့် internal memory စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော terminal တစ်ခုရှိသော်လည်းအလွန်အရောင်တောက်ပပြီးလှပသည်။
Blackview BV9000 Pro ၏ရှေ့
Blackview BV9000 Pro ၏နောက်ဘက်
Blackview BV9000 Pro ကိုမဖြန့်ချီသေးပါအလွန်မကြာမီဖြစ်လိမ့်မည်ပေမယ့်။ ဒါ့အပြင်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ , ၎င်းသည်ယူရို ၃၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိနိုင်သည်. ကွန်ကရစ်သတင်းကိုသာစောင့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Blackview BV9000 Pro: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး "မပျက်စီးနိုင်သော" စမတ်ဖုန်း
Ed Ga Or ဟုသူကပြောသည်
Ed Ga သို့ပြန်သွားရန်
18:9မျက်နှာပြင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတို့ပါ ၀ င်တဲ့ဒီ Blackview BV9000 Pro ဟာလူများစွာအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။
Juan Jose Rebull ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
Francisco က Perez Capel
Juan Jose Rebull အားပြန်ကြားပါ
Francisco က Perez Capel ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာ Pilar ပိုစတာထက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာပါတယ်
Francisco Perez Capel ကိုပြန်သွားပါ
Adam Chad ပါ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် သို့သော် NOMU မှ S10 Pro သည်ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ သာယာသည်။ ၎င်းသည်ရေစိုခံနိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားပြီးဘက်ထရီပိုကြီးပြီးငွေနည်းသည်။
Adam Chad အားပြန်ပြောပါ
Addison aiken ဟုသူကပြောသည်
NOMU နှင့် Blackview တို့၏ကြီးမားသောပန်ကာအဖြစ်။ အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်အနီးကပ်အာရုံစိုက်။ Blackview BV9000 Pro နှင့် NOMU T18 တို့သည်အလွန်ကောင်းသောဖုန်းများဖြစ်သော်လည်းနှစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်ကွာခြားသည်။ BV9000 Pro တွင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၊ ကြီးမားသော ROM၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကင်မရာရှိပြီး NOMU T18 တွင်ဘက်ထရီပိုကြီးသည်၊ အဆင့်မြင့် OTG နှင့်လက်ဗွေကိုသော့ဖွင့်ပြီးတီထွင်ထားသော walkie-talkie နှင့်ပြင်ပကင်မရာတို့ရှိသည်။ ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျပြောခြင်းအားဖြင့် NOMU T18 သည်နှစ်သိမ့်မှုများစွာပေးနိုင်သောကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ walkie-talkie လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပြင်ပကင်မရာသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နောင်အနာဂတ်တွင် Blackview သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖုန်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Addison Aiken သို့ပြန်သွားပါ
John bela ဟုသူကပြောသည်
အလွန်စျေးကြီးတဲ့အားကောင်းတဲ့ဖုန်း။ ဒီဟာစျေးနှုန်းနဲ့ထိုက်တန်လားမသိဘူး သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် NOMU S10 Pro နှင့်ဆက်သွယ်နေပြီ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြမ်းတမ်းသောဖုန်းကိုရှာဖွေနေသူအတွက်ကျွန်ုပ်သည် S10 Pro ကိုအကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းပြီး၎င်းသည် BV3 Pro ထက် ၃ ဆနီးပါးစျေးသက်သာသည်။ ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်စျေးနှုန်းကိုယူ။
John Bela ကိုပြန်သွားပါ
Marvel Strike Force ကို ၂၀၁၈ တွင် Android တွင်အသုံးပြုမည်
ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသည်အသိပေးအကြောင်းကြားစာကဏ္ new အသစ်ကိုဖွင့်သည်